कोरोनाबाट सनराइज स्कूलका प्रिन्सिपलको मृुुत्यु, आमा र दिदीको पनि ज्यान गयो — Sanchar Kendra
१सभामुख र स्वास्थ्यमन्त्री सिन्धुपाल्चोकको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदै
२सिन्धुपाल्चोकमा बाढीमा फसेकालाई सेनाले हेलिकोप्टरबाटै यसरी गर्यो उद्धार, भिडियोसहित
३झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि दिल्ली लगिंदै
४आज कहाँ-कहाँ आउन सक्छ बाढी ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
५हङेरी विरुद्ध पोर्चुगल ३-० ले विजयी, रोनाल्डोले राखे दुई रेकर्ड
६बाढी बढेपछि कोशी ब्यारेजको १२ ढोका खोलियो, केछ अवस्था ?
७मेलम्ची र इन्द्रावतीको बाढीमा ५० जना बेपत्ता भएको मन्त्री तामाङको खुलासा, फेसबुकमा लेखे यस्तो स्टाटस
८सिन्धुपाल्चोकको पहिरोमा परी अहिलेसम्म ७ जनाको मृत्यु, यस्ताे छ थप विवरण
९मौसमबारे ताजा अपडेट- देशका यी ठाउँमा हुनसक्छ भारी बर्षा
१०बाढी-पहिरोबाट १८ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान: कुन-कुन जिल्ला जोखिममा ?
११सिन्धुपाल्चोकमा बाढीको वितण्डा, अहिलेसम्म ४ जना बेपत्ता, भिडियोसहित
१२जी-सेभेन देशले चीनलाई चौतर्फी घेरे, चीनले दियो यस्तो कडा चेतावनी
कोरोनाबाट सनराइज स्कूलका प्रिन्सिपलको मृुुत्यु, आमा र दिदीको पनि ज्यान गयो
चितवन । चितवनको भरतपुर स्थित सनराइज इङलिस स्कूलका प्रिन्सिपल रोशन कुमार भण्डारीको को’रोना संक्रमणका कारण मृ’त्यु भएको छ । उनको ५२ बर्षको उमेरमा आज (सोमबार) विहान ३ बजे काठमाडौंको नि’दान हस्पिटलमा उपचारका क्रममा मृ’त्यु भएको हो ।
स्कूलका शिक्षक काँसिराम आचार्यका अनुसार उनि १६ दिनदेखि अस्पताल भर्ना भएका थिए । १७ दिन अघि भरतपुरबाट काठमाडौं जाँदा उनलाई सामान्य ज्व’रो आएको थियो ।
“यहाँबाट राम्रै जानुभएको थियो, सामान्य ज्वरो आएपनि अन्य समस्या थिएन, तर अ’कस्मात मृ’त्यु भएको दुःख’द खबर आयो, आचार्यले भने।” उनको एक महिना अघि मात्रै दिदीको मृ’त्यु भएको थियो । भारतको कलकत्ता जाँदै गर्दा जहाजमा दिदीको मृ’त्यु भएको थियो । दिदीको मृ’त्यु भएको चार दिनपछि आमाको पनि मृ’त्यु भयो । आमा भरतपुरमा छोरा भेट्न आएको समयमा यही मृ’त्यु भएको आचार्यले बताए ।
आमा र दिदीकोे भने को’रोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । स्व.भण्डारी २ बर्षदेखि सनराइज स्कूलमा प्रिन्सिपलको रुपमा कार्यरत थिए । पुख्यौली घर दोलखा भएका उनको परिवार काठमाडौंमा बस्दै आएको थियो । उनका श्रीमती र एक छोरा छन ।
बागमती सँग सम्बन्धित
सिन्धुपाल्चोकमा बाढीमा फसेकालाई सेनाले हेलिकोप्टरबाटै यसरी गर्यो उद्धार, भिडियोसहित
आज कहाँ-कहाँ आउन सक्छ बाढी ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
हङेरी विरुद्ध पोर्चुगल ३-० ले विजयी, रोनाल्डोले राखे दुई रेकर्ड